Però : Fankalazana Ny Fetiben’ny Masoandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2013 3:58 GMT
Vakio amin'ny teny English, Aymara, русский, македонски, Français, Italiano, اردو, polski, Español
Maherin'ny 64.000 ny olona nankalaza ny Inti Raymi, Fetiben'ny Masoandro, tao amin'ny zaridaina arkeolojikan'i Saksayhuaman, tokony ho 15 km miala ny tanànan'i Cusco.
Nanomboka tao amin'ny fiangonan'i Coricancha nombàn'ny fiarahabana ny masoandro, avy eo nitohy tao amin'ny Main Square no fizotry ny Inti Raymi. Farany, ny fara-tampon'ny lanonana dia ilay fankalazana tao amin'ny Saksaywaman.
Ny Inca, narahin'ny vadiny ( atao hoe coya) ary nohodidinin'ny olona maherin'ny 200 no niditra teo afovoan'ny kianja tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro, rehefa avy nandeha teo afovoan'ilay fiarovana mafy vita vato. Fankalazana maro no natao avy eo, toy ny fombafomban'ny chicha de jora [es], ny afo sy ny sank’u, ny foto-tsakafon'ny Andeana ( ilazana ireo mponina any Andes).
Fahitana ankapobeny ny Inti Raymi. Sariy avy amin'i Ayla Zanini ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).
Manamarika ny solistisin'ny ririnina (solstice) ny amin'ny ila-bolantany atsimo ny 24 Jona ; ilay andro fohy indrindra sy ny alina lava indrindra ao anatin'ny taona. Manamarika ny fiandohan'ny taona vaovao ny solistisin'ny ririnina, nandritra ny fotoanan'ny Inca, ary araka an'i Inca Garcilaso de la Vega, sady mpanoratra no mpahay ny tantara tamin'ny taonjato faha-17, dia io no tena lanonana ao anatin'ny taona.
Fanazavan'ny [es] tranonkala Bilaogy Toustodo ny atao hoe “solistisy” :
Mizara ny ampahany [es] amin'ny tantaran'ny Inti Raymi ny bilaogy Medios Alternativos :
Nisy ihany koa ireo filazalazana ny momba ny Fetiben'ny Masoandro tao amin'ny Twitter, tahaka ity nataon'i Kristell PerezAlbela (@Kristellpa) ity:
@Kristellpa [es]: Tiako raha mba nanatrika ny #IntiRaymi aho!!
Niteny tamim-pahasahiana i SanBlasSpanishSchool (@SanBlasSpanish) hoe :
@SanBlasSpanish: Omaly ny Inti Raymi, anatenaiko fa nankasitrahanareo izany !
Nandritra izany fotoana izany kosa no nizaran'i Val (@Vientino) ny fiandohan'ny fankalazana :
@Vientino [es]:Nanomboka omaly ka hatramin'ny androany maraina vao mangiran-dratsy no nankalazana ny fetiben'ny masoandro, ny Inti Raymi, teny amin'ny lembalemba sy ny tendrombohitr'i Andes.
Nanasongadina ny safidy raisin'ireo ray aman-dreny sasany rehefa hifidy ny anaran-janany i Anyel (@AnyelZae):
@AnyelZae [es]: Indraindray sahirana ireo ray aman-dreny rehefa hifidy ny anarana ho an-janany, ataovy hoe #intiraymi ohatra …
Nozarain'i Ralph H (@lopezraulh) avy any Arzantina ny fomba fankalazany io daty io :
@lopezraulh [es]: Nankalazainay tany am-piasana niaraka tamin'ny apacheta (vato mifanongoa) sy ny fanomezana ny Inti Raymi omaly. Izany no tena maha-hafa kely antsika.
Farany, nobitsihan'i ronaldchamat (@ronaldchamat) ny fihetseham-pony niaina ny Inti Raymi:
@ronaldchamat [es]: Dimy taona lasa izay, nanatrika ny #IntiRaymi aho, tena tombontsoa ho ahy ny nahafahana nanatrika io fotoana io indrindra http://elcomercio.pe/actualidad/159…